05 | November | 2013 | Burma Muslim
နိုဝင်ဘာ ၃ က ရခိုင်ကမ်းရိုးတမ်းတွင်း နစ်မြှုပ်ခဲ့သည့် လှေစီးမွတ်စလင်များအတွက် အမေရိကန်သံရုံး ၀မ်းနည်းကြောင်းဖော်ပြ
နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်၊ ၂၀၁၃
နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နေ့က ရခိုင်ကမ်းရိုးတမ်းတွင်း နစ်မြှုပ်ခဲ့သည့် မွတ်စလင် အယောက် ၇၀ တင်ဆောင် လာသော လှေကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံရုံးက ၀မ်းနည်းကြောင်းဖြင့် ၄င်းတို့၏ တရားဝင်ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာ ၌ ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ ဘာသာပြန်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဘက်ပိုင်းနေ မွတ်စလင် အယောက် ၇၀ နီးပါးစီးနင်း လိုက်ပါလာသည့် လှေမှာ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတွင် နစ်မြှုပ်သွားခဲ့ပါသည်။ ထို့သတင်းကြောင့် အမေရိ ကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် နက်နက်နဲနဲ ၀မ်းနည်းပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် တွင်း နေ ထိုင်ကြသူ များ၏ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လုံခြုံရေးအခြေအနေများမှာ ထိခိုက် လွယ်နေသေး သည့် အတွက်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ (အမေရိကန်နိုင်ငံ) မှ နက်ရှိုင်းစွာ စိုးရိမ်လျက် ရှိနေသေးကြောင်း (ဖော်ပြ အပ်ပါသည်။) ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် (မြန်မာ) အစိုးရအား ဒေသခံ အာဏာပိုင်များနှင့်သာမက လူသား ချင်းစာနာနားလည်မှုဖြင့် အကူအညီပေးနေသည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး အန္တရာယ်၏ (သားကောင်များဖြစ်ရန်) လွယ်ကူနေသည့် လူအများအား အကာအကွယ်ပေးရန်နှင့် ၄င်းတို့၏အခြေအနေအတွက် တာရှည်ခံမည့်အဖြေများကို အကောင်အ ထည်ဖော်ရန် တောင်းဆို အပ်ပါသည်။
The United States is deeply saddened by the news thataboat carrying nearly 70 people, reportedly Muslim residents of northern Rakhine State, capsized off the coast of Rakhine State on November 3. We remain deeply concerned about the security and humanitarian conditions of all vulnerable populations in Rakhine State. We urge the government to coordinate with local authorities as well as organizations involved in humanitarian assistance in the area to ensure the protection of vulnerable populations and develop durable solutions for their condition.
အအေးမိ ခြင်း၊ နှာစေးခြင်း များ အတွက် ဆေးများ ကို ကွမ်းယာ ဆိုင်များ မှ အစ နေရာ မရွေး အ လွယ် တကူ ဝယ်ယူ နိုင်ကြ ပါသည်။ သို့ဖြစ် ၍ လည်း အအေးမိခြင်း အတွက် မိမိ ဘာသာ ဆေး ဝယ် သောက်ကြ သည် က များသည်။ သတိထား စေ လိုသည်မှာ အအေးမိ၊ နှာစေး ပျောက်ဆေး အများစု တွင် အကိုက် အခဲ ပျော က်ေ ဆး ( လူအများ သိနေ ကြသည့် ပါရာစီ တမော Acetaminiophen ) ပါဝင်သည်။ ဖျားခြင်း၊ ကိုယ် လက် က…ိုက်ခဲ နာကျင်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက် ခြင်း အစ ရှိသော လက္ခဏာ များ ရှိက ထို အအေးမိ နှာေ စး ပျောက်ဆေး များ သောက်၍ ရပါ သည်။ သို့သော် ဖျားခြင်း၊ ကိုက်ခဲခြင်း များ မရှိ၊ သာမန် နှာေ စး ချောင်းဆိုး ခြင်း သာ ရှိသူများ အနေဖြင့် အကိုက် အခဲ ပျောက်ဆေး များ ပါဝင်သည့် အအေး မိပျောက်ဆေး များ သောက်ရန် မလို အပ်ပါ။ နှာစေး ခြင်း၊ နှာပိတ်ခြင်း အတွက် သုံးသော ဆေး သာ သောက် ရန် လိုအပ်သည်။
ထို့ အတူ အချို့သော သူများ က ထို အအေးမိ ခြင်း အတွက် သုံးသော ဆေးများ သာမက ကိုယ် လက် ကိုက်ခဲ ဖျားနာ သဖြင့် ပါရာစီတမော ပါ တွဲသောက် ကြ သည်။ ထိုအခါ လိုအပ် သော အကို က်အခဲ ပျောက်ဆေး ပမာဏ ထက် ပိုများ သွား ပါသည်။ လူတိုင်း သိကြ သည့် အတိုင်း ဆေး ဆို သည် က ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ ရှိပါသည်။ ပါရာစီ တမော ဆေးများ လိုအပ် သည် ထက် ပိုသော က်မိ ပါက အသည်း ကို ထိခိုက် စေနိုင်သည် ကို သတိမူ သင့် ပါသည်။
ဆေးကို အမှန် တကယ် လိုအပ် မှ သောက် ခြင်း သာ အကောင်ဆုံး ဖြစ် သည်။ သို့ဖြစ် ၍ အအေး မိ ၍ ဆေးဝယ် သောက်မည် ဆို ပါက Acetaminiophen( ပါရာစီတမော ) ပါ၊ မပါ ကို ဆန်းစစ် သ င့် သည်။ အကောင်းဆုံး မှာ ဆေး အကြောင်း နားလည် တတ်ကျွမ်း သူ သို့မဟုတ် ဆရာဝန် နှင့် တိုင်ပင် ပြီးမှ သာ သောက်ခြင်း သာ ဖြစ် ပါသည်။
မှတ်ချက် – နာတာရှည် ရောဂါ ဥပမာ – သွေးတိုး ရောဂါ ရှိသူများ၊ အသက်ကြီး သူများ အနေဖြင့် အအေးမိ နှာစေး ပါက ဆရာဝန် နှင့် ပြသ ပြီး မှသာ ဆေးသောက် သင့် ပါသည်၊၊